ठुलो चाहना छैन तर वडा सदस्यको शसक्त दावेदार हुँः माओवादी स्थानिय नेता पौडेल | KTM Khabar
२०७३ चैत्र ३० गते २२:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । आउदै गरेको स्थानिय चुनावलाई स्थानिय तहका नेता कार्यकर्ताले कसरी लिएका छन अझ सत्ताको नेतृत्व गर्दै गरेको पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थानिय कार्यकर्ताले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाण्डौ महानगरपालीका वडानं ७ का वडा कमिटि सदस्य, स्थानिय नेता हरिओम पौडेल (चट्टान) संग केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले कुराकानी गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
स्थानिय तहको चुनाव सरकारले घोषणा गरेसंगै तपाई निकट पार्टीको चुनावी माहोल कसरी अगाडि वढाउदै हुनुन्छ ?
खै कसरी अगाडी बढाउदै छौ भन्नु र आशा लाग्दो उत्साह बर्दक छैन । यो मैले ढाट्न हुदैन तर हामी मिलेर गयौ भने कमजोर पनि छैनौ । म पार्टीको सिपाही हुँ वडा कमिटि सदस्य छु । म जस्तो समान्य कम्युनिष्ट सिद्धान्त मन परेर पार्टीमा हिडेको मान्छेले ठुला कुरा गरेर कसैले पत्याउलान भन्ने लाग्दैन तर हामी पार्टीको निर्देशन पालना गरेर पार्टीलाई स्थानिय तहमा जिताउन लागि परेका छौँ । मैरै कुरा गर्नु हुन्छ भने म सामान्य मान्छे तर माओवादी पार्टीमा युद्धको अवस्था देखि नै आस्था राखियो, विश्वास राखियो त्यो आस्था अझै घटेको छैन मरेको छैन र यो उमेरमा पनि पार्टी प्रतिको उत्साह उमंग अझै ज्युदै छ र कसैले विरोध गरेर यो उत्साह मर्ने छैन र आगामी चुनावमा माओवादीकेन्द्र शसक्त भएर आउछ भन्ने विश्वास छ ।
भने पछी स्थानिय चुनाव तपाईहरु जित्नु हुन्छ ?
त्यसका शंखा नगर्नुहोस । हार्ने मानशिकताबाट चुनाव लडिदैन जित्ने नै हो र पार्टीले राम्रा र निष्ठा नछोडेका साथीहरुलाई टिकट दिएको खण्डमा माओवादी केन्द्रले चुनाव जित्छ तर पार्टीले स्थानियलाई प्रायटिमा राखेन र स्थानियलाई डिलिट हान्ने, टिकट नदिने, स्थिति आएमा अस्तित्व नै दाउमा पर्न नसक्ला भन्न सकिन्न तर पार्टीले कुशल र असल त्यो पनि स्थानिय ब्यक्तिलाई टिकट दियो भने अस्वस्थ कांग्रेस, एमाले जनहरुले हामीलाई कमजोर नठाने हुन्छ । हामी कमजोर छैनौ टक्कर दिन तयार छौ ।
तपाई पनि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ कि ?
हो ! मैले वडा सदस्यमा दावि गरेको छु र पार्टीले मेरो मुल्यांकन गर्छ भन्नेमा छु । म दावाका साथ भन्छु म जुन ठाउमा माओवादी केन्द्रको वडा कमिटि सदस्य छु । म पुस्तौ देखि यहिको बासिन्दा हुँ । मेरो जिजुवा, हजुरवा, बुवा सबै यहिको हो । म वागमतीमा पौडि खेलेर चाबहिल स्कुल पढेर यही कुमारिगालमा हुर्केको हुँ । अर्को कुरा आफ्नो संगठनका त आफ्नै हुन तर म विपक्षि साथिहरुको दैलो खोलेर किचनसम्म पुगेर भोट माग्ने हैसियत राख्ने स्थानिय ब्यक्ति हुँ । यो कुरा पार्टीले बुझ्छ भन्नेमा छु । मैले भनि सके यदी स्थानियलाई डिलिट हान्ने अनि चुनाव जित्नु पर्छ भन्ने हो भने त्यो असाध्यै कठिन छ । पुर्व र पश्चिमबाट आउनु भएका साथिहरु प्रति गुनासो हैन तर स्थानिय चुनाब हो स्थानियसंग भिजेको मान्छे चाहिन्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।
भनेपछि पार्टी प्रति पनि तपाईको गुनासो हो ?
हैन । त्यस्तो गुनासो त छैन तर निष्ठा र आदर्श बोेकेका साथीहरुलाई पुरै डिलिट हानेर पैसा र शक्ति भएकाहरु मात्र पार्टीमा हाबी हुनु माक्स र लेलिनको आदर्श छोड्नु हो भन्ने लाग्छ तर पार्टी अझै शसक्त भएर आउने छ यसमा शंखा छैन । प्रचण्ड प्रति जनताको विश्वास अझै घटेको छैन देशले निकास पाउछ भने त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी बाहेक अरुबाट सम्भव छैन ।
अन्त्यमा म कामनपा वडा नं ७ वाट सदस्यको शसक्त दावेदार हुँ । मैले आफ्नो बैठकमा दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छु । मैले भन्नै पर्ने हुन्छ म स्थानीय हुँ । माथि नै भनि सके विपक्षिको दैलो ढक–ढक्याएर पार्टीलाई भोट माग्ने हैसियत राख्ने मान्छे कोही मेरो कमिटीमा छ भने म मात्र एक हँु दावाका साथ भन्न सक्छु । तपाईले मेरो स्थानिय धरातर वुझ्न सक्नुहुन्छ तर यसो भन्दा अरु साथीहरु कमजोर भन्न खोजेको हैन अरु साथीहरु पनि अब्बल हुनुहुन्छ । यसमा शंखा छैन तर घर घर छिरेर काठमाडौँमा भोट माग्नु चानचुने कुरा हैन । गल्ली गल्लीमा माईक तर्साएर भोट आउदैन । थोरै गुनासो छ । पैसा र शक्ति नभएका हामी जस्ता भनौन निष्ठा भएका साथीहरुलाई पन्छाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । यस्तो गरिनु हुदैन । यदि पन्छाउन खोजीयो स्थानियलाई डिलिट हानियो र हुलका हुल भोटर लिस्ट मै नाम नभएका सोतरहरु अगाडि पछाडि लगाएर चुनाब जितिन्छ भन्दै हुनुन्छ भने त्यो भ्रम हो । यो पार्टीले वुझ्नु पर्छ ।
समयको लागि धन्यवाद ।
धन्यवाद मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएको मा ।